शु’क्रकिट (वि’र्य) दान गर्नका लागि अपिल ! दान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ दिने – Sandes Post
April 4, 2022 4840
शु’क्रकिट (वि’र्य) दान गर्नका लागि अपिल ! दान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ दिने काठमाडौँ – चिनमा पुरुषहरुले शु’क्रकिट दान गरेबापत झण्डै १ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पाउने भएका छन् ।
चीनको एक शु,क्र किट बैंकले आम पुरुषहरुलाई शु,क्र किट दान गरेबापत झण्डै १ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम दिने घो’षणा गरेको छ ।
स्पर्म बैंकका अनुसार शु,क्र कीट दान गर्ने व्यक्ति २० देखि ४० वर्षसम्मको हुनु पर्नेछ । साथै व्यक्तिको पढाई कम्तिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण तथा उचाई कम्तिमा ५ फिट ४ इन्च र हुनपर्ने जनाएको छ ।
Prevयी चीजले ५ मिनेटमै निकाल्छ दाँतमा जमेको फोहार, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
Nextमहिलाले गरिन ट्याक्सी चालक पुरुषको करणी !